XOG: Xaggee ku dambeeyeen Raggii dilay Caasho Ilyaas Aden, Maxaase hortaagan in lagu fuliyo Xukunkii lagu riday?
December 30, 2019 NEWS 0
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu helay macluumaad dheerad ah oo la xariira sababaha rasmiga ah ee loo fulin waayay xukunkii ay riday Maxkamadda sare ee Puntland, taas oo ahayd in dil lagu fuliyo sadex nin oo lagu helay in ay ka dambeeyeen dil fool-xun oo bishii Febaury magaalada Gaalkacyo loogu geystay gabar yar oo lagu magacaabo Caasho Ilyaas Aaden.
Hanaanka Garsoorka ee Puntland ayaa isku raacay in sadexda nin ay ka dambeeyeen Afduubkii, Kufsigii iyo Dilkii Caasho Ilyas Aaden, ayna maraan hanaanka Cadaaladda oo ah in loo dilo, taas oo ay soo dhaweeyeen Shacabka Soomaaliyeed.
Warsidaha ayaa ogaaday in Maxkamadda Sare, markii ay qortay qoraalka dilka ah, ka dib loo gudbiyey xeer Ilaalinta dawladda Puntland, ka dibna ay u gudbisay Madaxtooyada si u soo saxiixo Madaxweynaha Puntland.
Kiiska ayaa ku beegmay waqtigii ay Madaxtooyadu baahida u qabtay codadka xildhibaanada baarlamaanka, oo ay doonaysay in meesha laga saaro Afhayeenkii hore ee baarlamaanka CabdiXakiim Max’ed Axmed (Dhooba-Daareed), taas awgeedna Madaxweynaha Puntland uu dib ugu dhigay kiiskan in uu qalinka ku duugo.
Warar ay baahiyeen qaar kamid ah taageerayaasha Xukuumadda ayaa horey loogu sheegay in Madaxweynaha Puntland uu saxiixay in la dilo kuwii ka dambeeyey dilkii Caasho Ilyaas Aaden, laakiin xogta aan helnay ayaa sheegaysa in aysan waxba ka jirin warkaas.
Qaar kamid ah ehelada dhaw ee qoyska Caasho Ilyaas oo ka gaabsaday magacyadooda ayaan kasoo xiganay in aysan jirin wax talaabo ah oo ay qaadeen laamaha shaqada ku leh, ilaa Maxkamadda Sare ay kasoo dhamaatay.
Welwelka ay qabaan ayaa ah in dhacdadan siyaasad la dhexgashay, maadaama Madaxtooyadu ay u baahneyd codad Xildhibaano halkaasna ay ka dhasheen arrimo ku saabsan kuwa siyaasadeysan oo ku wajahan kiiskaas.
Laakiin xariiro aan la sameynay, dhanka Madaxtooyada iyo Garsoorka Puntland waxay noo sheegeen in aysan haynin macluumaad faahfaahsan oo ay waqtigan gudbin karaan, qaarkoodna weyba diideen in ay ka hadlaan ama wax laga weydiiyo.
Xog ka madax banaan dhinacyadan ayaa sheegaysa in xagga Qabaa’ilka gobalka Mudug ay doonayaan in arrinta dib loo celiyo oo lagu dhameeyo xeer jajabka Soomaalida, gaar ahaana Anooyin hore iyo xeerar horey u dhacay oo ay hadda adeegsanayaan Qabaaisha ay kasoo jeedaan ragga dilkan lagu helay.
Isku dayga ku wajahan in hab hoose oo qabaa’il loo xaliyo qadiyadan ayaa ah mid ay wali gadaal ka riixayaan xubno katirsan Golayaasha dawladda, iyadoo ay sidaas oo kale jiraan is aragyo gaar ah oo dhacay todobaadyadii lasoo dhaafay.
Ehelada Caasho Ilyaas ayaa horey u sheegay in aysan aqbali doonin wax ku saabsan heshiis ay lagalaan cid gaar ah oo ay ku qanacsan yihiin oo kaliya Cadaaladda ay ka helaan Maxkamadaha Puntland, balse talaabadaas ilaa hadda ma noqon mid lafuliyey.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni wuxuu horey u balan-qaaday in ay Xukuumadiisu fulin doonto xukunka ay maxkamaduhu gaaraan, isagoo sheegay in ay si gaar ah Kiiska Caasho Ilyaas Masuuliyad iskaga saari doonaan, balse ilaa hadda ma uusan saxiixin Madaxweynuhu talaabada dilka sadexda nine e dambiga lagu helay.
LA SOCO WARARKEENA RIIX HALKAAN
Madaxweyne Denni oo Imaaraadka Carabta u mahad celiyey
XOG: Jaah wareer ka taagan Urur siyaasadeedka Denni ee KAAH, is haysi taagan & Labo garab oo loo kala jabay durba!
TOOSHKA P/LTIMES: Sool gobol lagu baratamo oo loo baroor diiqo xiliga baaxa dega doorashada Puntland
Wararkii ugu dambeeyey ee Bosaso & Dadkii ku dhaawacmay qaraxii xalay oo wariyaal ku jiraan
DAAWO:Axmed Karaash oo ka hadlay arin aan laga filayn & Isku shaandheyntii wasiirada Puntland oo….
XOG: Dadkii laga helay Xanuunka Corone-Virus ee Muqdishi oo la ogaaday in ay la kulmeen maalmo kahor Madaxda Sare ee DF Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimaadka Somalia oo soo saartay qodobo cusub
DEG DEG: Qofkii 1aad oo goor dhaw Soomaaliya ugu geeriyooday Caabuqa-Corone Virus.
Qofkii ugu horeeyey oo Muqdisho ugu geeriyooday Coronavirus
DAAWO:Gudoomiye Shuute”Nolol ama Geeri halagu keeno kuwii Walaweyn dhibaatada ka gaystay”
DAAWO:Somaliland oo sii daysay 50 qof oo lagu karantiilay duleedka Hargeysa
Xiisad dagaal oo ka taagan degmada Xudun kadib dil ka dhacay deegaankaasi
DEG DEG:Dagaal qabow oo ka dhex bilowday Puntland & Somaliland
Xifaaltanka Somaliland kula jirto Somalia oo xididaha u siibay xadhkihii dhaqaalaha Somaliland
Ethiopia oo ku dhawaaqday xaalad deg deg ah